Ubuso obugqibeleleyo, isicelo sokuhlela ukungafezeki kwiifoto zethu | Ndisuka mac
Ubuso obugqibeleleyo, isicelo sokuhlela ukungafezeki kwiifoto zethu
Ubuso obugqibeleleyo, sisicelo esilula esivumela ukuba sihlele iifoto zethu zobuso ukuphelisa ukungafezeki okunjengamabala okanye okufanayo. Kuyabonakala ukuba eSijongene nesicelo esisisiseko malunga nokusebenza kunye nokukhetha okukuvumelayo, kodwa ukubamba kancinci ngaphandle kokufuna okuninzi, kunokusisebenzela ngokugqibeleleyo.
Isicelo besifumaneka ukusukela ngo-2016 kwiVenkile ye-Mac App kunye ngoku okwexeshana simahla. Kuyinyani ukuba ixabiso alikho liphezulu esilifumanayo kolu hlobo lokuhlela ifoto okanye ukufaka isicelo kwakhona, kodwa ukuba sinokuyifumana simahla, kuya kuba ngcono.
Isinxibelelanisi sesicelo ngokwaso sele sisibonisile ukuba ayisosicelo sicace gca okanye apho sinokulindela ukusebenza okumangalisayo ngokweenketho zalo, kodwa siyaphinda siyiphindaphinde loo nto kulowo uphinda ubeka umfanekiso kumfanekiso apho kufuneka silungise nakuphi na ukungafezeki. kulusu lwethu isebenza ngokupheleleyo eyona nto ibaluleke kakhulu.
Umsebenzi ulula kwaye xa sele sikhutshelwe kwi-Mac yethu, konke ekufuneka sikwenzile kukucofa kabini kwindawo esifuna ukufaka kuyo ukulungiswa kombala kwaye kuya kwenziwa ngokuzenzekelayo. Nathi sinako ukwenjenjalo hlela umbala womfanekiso wonke usebenzisa iziphumo, lungisa indawo engaphezulu okanye ukongeza umbala wokulungiswa ngokwethu eminye yemisebenzi esi sicelo esinayo. Ngale nto, iba yinto enomdla ngokwenene kulungiso oluncinci kwiifoto zobuso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Mac App Store » Ubuso obugqibeleleyo, isicelo sokuhlela ukungafezeki kwiifoto zethu
I-BMW kaSteve Jobs iyathengiswa kwifandesi Ngaba unayo imali?
IMicrosoft isungula inguqulelo ehlaziyiweyo ye-Skype, ngokusebenza kwesixhobo esinqamlezileyo